imibala emibini yeapile yomoya iyathengiswa ngexabiso eliphantsi kunakuqala
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Imibala emibini ye-Apple AirPods Max iyathengiswa ngexabiso eliphantsi kunakuqala
Kunzima ukucebisa nge- $ 550 AirPods Max xa uninzi lweefayile ze- Eyona nto iphambili kwisiphelo seBluetooth ziyafumaneka namhlanje zihlala zixabiso kumakhulu aliwaka eerandi, kodwa ukukwazi ukucheba i-50 yeedola kwi-MSRP yeApple & apos; iipremiyamu zokuqala ezindlebeni zitshintsha i-equation ... kancinci.
Ngokucacileyo, isaphulelo seepesenti ezili-9 asisiyontengiselwano, kodwa kholwa okanye ungakholelwa, la makhwenkwe mabi awazange athengiswe ngaphambili 'ngexabiso eliphantsi' ngaphambili. Intengiso ikhutshwe kwiinyanga ezintandathu ezidlulileyo , Elona lungu likhulu nelinomtsalane Intsapho ephumelele kakhulu yee-AirPods yayifakwe uphawu lwangaphambi kweedola ezingama-30.
Fumana ii-AirPods Max ngesona saphulelo siphakamileyo
Njenge loo nto ithobekileyo iiveki ezimbalwa emva , Esi sipho sinyanzelisa kancinci sivela eAmazon kungekho ntambo iqhotyoshelweyo kwaye akukho mfuno zaluphi na uhlobo. Ngelishwa, awufumani ukhetho oluninzi lwe-chromatic ngeli xesha, njengoko isilivere kunye nesibhakabhaka iincasa eziluhlaza ikukuphela kwazo ezilanda i-50 yeedola ngaphantsi kwesiqhelo ngoku.
Ii-hues eziluhlaza kunye ezipinki, okwangoku, ngoku ziyafumaneka kwizaphulelo ezingathathi ntweni ze- $ 9 kunye ne- $ 6 ngokwahlukeneyo, kunye nesithuba esinegrey version ebiza ixabiso njengesiqhelo.
Ewe kunjalo, zilukhuni apile abalandeli abafuna ukongeza ingqokelela ye 'iDevices' kunye 'neeAccessories' akunakulindeleka ukuba babhatale ingqondo eninzi ... malini ekufuneka beyihlawulele inkampani yabo abayithandayo kunye neapos; ezilindelweyo ezizezinye ezinokulindelwa zizinto ezifana neBose 700 kunye I-Sony WH-1000XM4 .
Le mibala ye-AirPods Max nayo iyathandeka
Ngokufana neentshaba zabo eziphezulu, ii-AirPods Max ziza nobuchwephesha bokurhoxisa ingxolo yobuchwephesha kunye nomgangatho weaudio yomgangatho, kunye nobomi bebhetri obufikelela kwiiyure ezingama-20 zexesha lokumamela elingaphazanyiswanga phakathi kweentlawulo.
Ukongeza kwiziphene ezisisiseko eziqaqanjiswe kubunzulu bethu Uvavanyo lwe-AirPods Max emva kuJanuwari, unokufuna ukuqaphela iiAmazon & apos; zisondela ngokukhawuleza Inkulumbuso 2021 umnyhadala, apho silindele ukubona uninzi Iintengiso ezinkulu zeBluetooth enikezelweyo, ngaphambi kokutsala ngaphambi kwexesha.
Ke kwakhona, akukho ziqinisekiso zokuba ii-AirPods Max ziya kuba zitshiphu ngenene NgoJuni 21 nowama-22 , kwaye ukwazi iApple, ngekhe simangaliswe ukuba oko akunjalo kwaphela.
Isikwere se-Enix ukumilisela umdlalo weHitman oshukumayo wasimahla
Abathengi abaliqela beRobinhood baphulukana nayo yonke imali yabo, kodwa hayi kwimisebenzi emibi
Xa kufikwa kumba wokugubungela i-5G kuhola wendlela, i-T-Mobile iyinombolo yokuqala kumazwe